पत्रकारको भेलालाई नारायणकाजीले बहिष्कार गरे कि बोलाइएन ? - नेपालबहस
पत्रकारको भेलालाई नारायणकाजीले बहिष्कार गरे कि बोलाइएन ?
| ११:२७:४९ मा प्रकाशित
७ माघ, काठमाडाैं । सत्तारुढ दल नेकपामा आएको विभाजनसँगै जनवर्गाीय संगठनहरु पनि विभाजित भएका छन् । दुवै पक्षले जनवर्गाीय संगठनहरूका कार्यक्रम गरिरहेका छन् । युवा, विद्यार्थी, पेशागत महासंघ, मजदुर लगायतका जनसंगठनहरुका कार्यक्रमहरु भैरहेका बेला नेपाल –दाहाल समूहले मंगलबार काठमाडौका पत्रकारहरुको पनि भेला गरेको थियो ।
राष्ट्रिय भेला नाम दिएको सो कार्यक्रममा समूहका अध्यक्षद्धय माधवकुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहालले सम्बोधन गरेका थिए । तर सो कार्यक्रममा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि आउने भनिएको थियो । तर उनी भने उपस्थित भएनन । पत्रकार र प्रचार भनेपछि हुरुक्क हुने प्रवक्ता श्रेष्ठ पत्रकारकै कार्यक्रममा नआउनुले त्यहाँ केही न केही गडबडी छ भनेर आशंका गर्न थालियो । उनी काठमाडौमा छैनन् कि भनेर सोधीखोजी समेत गरियो तर उनी काठमाडौमै भएको पत्ता लाग्यो ।
तर उनी किन आएनन त भन्ने प्रश्नकाे जवाफ भने आधिकारिक रुपमा कतैबाट आएको छैन् । पूर्व एमालेमा प्रचार विभाग सम्हालेका योगेश भट्टराईले सम्बोधन गरेसँगै उनले पनि सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम राखिएको थियो । तर उनी देखिएनन । के उनले पत्रकारहरुको कार्यक्रम बहिष्कार नै गरेका हुन त ? वा उनलाई बोलाइएन त ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । काठमाडौमा समान्य भन्दा सामान्य कार्यक्रममा पनि सहभागी हुने श्रेष्ठ मंगलबार मंगल थापा नामका एक व्यक्तिलाई पार्टी प्रवेश गराउन लागे कि भन्ने पनि आशंका छ ।
यद्यपि मंगल थापा प्रवेश गराउन उनी आफै लाग्नु पर्ने अवस्था थिएन । उनी प्रेस संगठनको कार्यक्रममा नगएपछि आफू काठमाडौंमै रहेको प्रमाण दिन साँझ मंगल थापासँग बसेको तस्वीर सार्वजनिक गरेका थिए । खासमा पूर्व माओवादी समूहका पत्रकाहरुले उनलाई खबर नै नगरेपछि श्रेष्ठ कार्यक्रममा नगई घरमै खुम्चेर बस्नु परेको थियो । उनलाई नबोलाएको थाहा पाएपछि पूर्व जनमोर्चा समूहका पत्रकाहरु रुष्ठ बनेर बुधबार विहानै श्रेष्ठलाई भेट्न ललितपुर पुगेको स्रोतले जनाएको छ ।
नेकपा एकता अभियानमा गैँडाकोटमा कमिटी गठन १६ मिनेट पहिले
सिभिल अस्पताल पुगेर प्रचण्डले लगाए कोरोना खोप ४६ मिनेट पहिले
दाहाल-नेपाल समूहको केन्द्रीय कमिटी बैठक आज बस्दै ४ घण्टा पहिले
अबको प्रधानमन्त्री ओली नै हुने बस्नेतको जिकिर १५ घण्टा पहिले
पेरिसडाडाँमा केन्द्रीय सदस्यहरुलाई परिचयपत्रसहित उपस्थित हुन निर्देशन १७ घण्टा पहिले
ताप्लेजुङ आगलागी विस्थापितलाई भूकम्प पीडितसरह सहयोग माग १८ घण्टा पहिले
जीर्ण रहेको आकाशेपुल मर्मत र निर्माण गदै महानगर भर्खरै
राष्ट्र बैंकले दियो ‘डिजी पे’लाई भुक्तानी सेवा प्रदायकको अनुमति २ मिनेट पहिले
नेपाली बजारमा ओरालो लागेको सुनको मूल्य बढ्यो ६ मिनेट पहिले
सभामुख र सांसदले लगाए कोरोना खोप १० मिनेट पहिले
निजगढ नपाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्कीको कारण नगरपालिकाको बदनामी हुँदै १३ मिनेट पहिले
रुखमा भुण्डिएको अवस्थामा पुरुषको शव फेला २९ मिनेट पहिले
नारी दिवसमा श्रीमतीले श्रीमान् बोकेर दौडिने ३३ मिनेट पहिले
नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघको महाधिवेशन चैत ७ गते, प्रधानमन्त्री ओलीले उद्घाटन गर्ने ३७ मिनेट पहिले
प्रधानमन्त्रीको सुरक्षामा खटिन्छन सुरक्षाकर्मी, सुरक्षा थ्रेट कसरी हुन्छ ? ३९ मिनेट पहिले
डोको–डालो बनाएरै आम्दानी गर्दै महिला ४० मिनेट पहिले
सरकार र विप्लवबीच पहिलो चरणको वार्ता सकियाे ४९ मिनेट पहिले
फुङ्लिङमा आगलागीबाट ३३८ परिवार विस्थापित ५० मिनेट पहिले
डा. बाबुराम भट्टराई नेपाल आइपुगे १८ घण्टा पहिले
भूकम्पले क्षति भएको घर मर्मतका लागि ५४५ निवेदन ६० मिनेट पहिले
रेशमलाई जेलमा राखिरहने तागत अब कसैसँग छैन् : महतो २२ घण्टा पहिले
प्रवीण बाँस्तोला हत्या प्रकरणमा थप एक प्रतिवादी पक्राउ २२ घण्टा पहिले
बेक्रिङ न्यूज : सरकार र विप्लवबीच बालुवाटारमा वार्ता सुरु २ घण्टा पहिले
पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पताल उदघाटन गर्न ओली झापा पुगे २३ घण्टा पहिले
प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा प्रदेश गौरव भिलेजको उदघाटन २१ घण्टा पहिले
विप्लवसँग वार्ता गर्न गृहमन्त्रीको नेतृत्वमा समिति गठन २३ घण्टा पहिले
सिरहामा युवकको शङ्कास्पद मृत्यु, कुटपिटको जाहेरी दर्ता २ दिन पहिले
अस्ट्रेलियामा कङ्गारूको १७ हजार वर्ष पुरानो चित्रकला ७ दिन पहिले
विघटनअघिका ३२ विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेश हुँदै ३ दिन पहिले
राष्ट्रिय भावनाले ओत प्रोत हाम्रो कालापानी सार्वजनिक २४ घण्टा पहिले
बहुविवाहका अभियुक्तलाई एक वर्ष कैद र १० हजार जरिवाना १ दिन पहिले
सडक निर्माणमा ढिलासुस्ती गरेको भन्दै वीरेन्द्रनगरमा प्रदर्शन ६ दिन पहिले
ओलीले देशलाई नै विघटनको बाटोमा पुर्‍याए : प्रचण्ड १ हप्ता पहिले
मौरी र सुन्तला जोनको सफलतापछि नयाँ जोनको सिफारिस १ हप्ता पहिले
सप्तरीबाट स्रोत नखुलेको १० लाखसहित दुई महिला पक्राउ १ हप्ता पहिले
उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन चुस्त पार्न स्वयंसेवक परिचालन २ हप्ता पहिले
महिला ट्रेकिङ्ग उद्यमीहरुलाई प्रभु बैंकद्धारा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान २ हप्ता पहिले
कोरोना रोकथाम कोषमा सिभिल बैंकको ८७ लाख सहयोग ११ महिना पहिले
नयाँ बसपार्क साँच्चै नयाँ र सुन्दर बन्दैछ १ वर्ष पहिले
सरकारले जनताको लागि न्यूनतम काम नगरेको नेता सिंहको आरोप ५ महिना पहिले
तनहुँमा छ चितुवाको मृत्यु, आठको उद्धार ७ महिना पहिले